OpenRGB: vhezheni nyowani yemazhinji-mutengesi RGB yekudzora app | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uine michina ine RGB mwenje mwenje uye iwe usingakwanise kuwana mhinduro yekudzora mavara kubva kune yako aunofarira GNU / Linux distro, ipapo iwe unofanirwa kuziva nezve iyo RGB mwenje yekudzora app inonzi OpenRGB. Iyo yakavhurika sosi software iyo inobvumidza kutonga kune akasiyana vatengesi veiyi mhando yehardware, panzvimbo pekupa chete kutonga kune imwe yakatarwa.
Zvakare, iyi mhinduro iri dzakasununguka zvachose uye inowanikwawo kune mamwe mapuratifomu. Iine yakajeka uye inonakidza graphical interface, uye izvo hazvimire kuvandudza kuenderera nekuwedzera zvirinani rutsigiro nemabasa matsva. Kana iwe uchifarira chirongwa ichi, unogona kudzidza zvakawanda kana kuchiisa kubva yako saiti paGitLab, kubva kwavanokupa zvese zvaunoda ...
Nekutanga kweiyo OpenRGB vhezheni 0.4 kumwe kunatsurudzwa kunovandudzwa kwasvika, pakati pazvo panogona kusimbiswa senge:
Iyo yakajeka graphical LED yekutendera iyo inobvumidza iwe kuti uone iyo irimo mamiriro uye sarudza akawanda maLED kuti akurumidze kuisa mavara.
Kuonekwa kwechigadzirwa kumashure, kuti usakanganisa. Bhaa rekufambira mberi chete ndiro rinozoratidzwa kuratidza mamiriro ekuonekwa uye rinokutendera kuti ukanzure kuwanikwa kana uchida.
Iwo keyboard uye mbeva LED mazita akave akaenzana, achibvumira kuti ive nani kusangana neAurora.
Mapfupi eWindows ave kushanda nemazvo, achibvumira nharo kudomwa uye nzira yekuzvigadzirira yekugadzira
Nyowani I2C chishandiso kuverenga akawanda-byte SMBus marejista (senge ASRock mabhodhi).
Kunze kwezvose izvozvo, pane vatyairi vatsva yeCorsari Hydro inotonhodza zvikamu zvakaita sePro H100i Pro uye H115i Pro mamodheru, Tecknet M008 mbeva, uye HyperX Pulsefire Surge Mouse, ASRock Polychrome controller zvigadziriso, RGB Fusion 2 SMBus inogonesa pane mamwe mamaboard, rutsigiro rwuri nani rweMSI GPUs, RGB Fusion 2 USB kuona ine bug yakagadziriswa, mamepu ekhibhodi nyowani akawedzerwa, nezvimwe
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » OpenRGB: vhezheni nyowani yemazhinji-mutengesi RGB yekudzora app
Matambudziko ekutanga ePineTab + UBports uye mamwe emhinduro dzayo atozivikanwa